Dating mazano. rinooma dzorudo?
5 Ideas kuti panoda Romance
New kufambidzana nguva dzose zvinofadza, mafaro, uye wakazadzwa. Asi sezvo nguva mberi vakawanda rinooma dzorudo uye chido. Kana ukaona zviratidzo mangwanani zvakakwana, zvino pano zvinhu zvishanu zvaungaita kuti perk kukwira dzorudo uye panoda kuti chimvari:
Edza kusiya rudo shoma manotsi dzaisatarisirwa nzvimbo kuti mumwe wako kuwana pavaidira nguva yose yake zuva. Inodonha shoko mudiwa wako kuti bhegi vasati musoro kuti basa, zvichaita changu rokushanda yavo uye kuvaita kuzoona imi pashure basa. Isa pfupi rudo tsamba vari mikwende yavo vasati vaenda rwendo, uchivaudza kuti muchava kurasikirwa navo uye havagoni kumirira kusvikira kumusha. Nyora 'Ndinokuda’ kana kudhirowa mwoyo vari chiutsi pamusoro yokugezera girazi nokuti nguva inotevera mumwe wako zvinotora yokugezera. Ndingomubayirira katsamba kuna windshield wako waunoda kuti motokari nokuti nguva inotevera vane kumhanya shoko.
Kuenda yokuwedzera maira kuburikidza zvakavanda achiyeuchidza kwako kunokosha zvimwe nei vari zvinokosha kuti unogona kuva hombe rubatsiro apo vachiedza kuvaka dzorudo muukama hwako. Hamusi chete kutendera mumwe munhu azive uri kufunga nezvavo, asi uchava kugara pfungwa dzavo yose zuva uyewo.
Rangarirai kutanga ukama hwako? Kazhinji iwe nemumwe wako zvose zvaiva pamusoro mumwe, vakabata maoko nguva dzose pana, achiti refu, wakazadzwa goodbyes pakupera musi, uye vachimbundirana mumwe pamukana wose. Ndiponesezve mazuva akare nokusvika ndiratidze mudiwa wako. Tambanudza uye maoko nomumwe wako paunenge uchifamba nomugwagwa, kutamba footsies pasi petafura pamabiko, uye ipai mudiwa refu kutsvoda goodnight wako pakupera yemichindwe dzenyu.
Vakupe chaiko zvinogona zvirokwazvo ikwanise dzorudo kuti yave kupera. Kazhinji, mudiwa wako Ichatakura pamusoro anonongedzera enyu uye kupindura zvaizoitawo pamwe rudo uye rudo.
3. Kuenda rwendo For Two
Zviri nyore chaizvo kuti upenyu hwezuva nezuva kuwana nenzira kudanana. Dzimwe nguva iwe nokutendeseka sokuti hauna nguva yokuti dzorudo. Nzira huru kutiza zvose uye kufunga kuvakazve pako ukama ndeyokubvuma rwendo pamwe chete. Ronga kuzororo kana vhiki uchapukunyuka (zvichienderana nenguva zvakadini une zvavanongosiya) kuti kunosanganisira yakawanda private kutandara nguva uye mumwe nomumwe kudyidzana. Zvichida Kupera kwevhiki pane kylpylä kana vhiki iri inopisa achaita minimini.
Kana zuva nezuva upenyu kukuvhiringidza kure nomumwe wako, kutiza zvinotsausa nokuda chaizvoizvo kuwana pazviri zvose. Zvinogona kuita ukama hwako nyika zvakanaka uye kwenyama mese. Uchava vanopedza nguva nezvezvandaifanira mumwe, kwete nezvezvandaifanira basa, chikoro, kana mhuri nyaya.
4. Ipa Gift
yeuka, nokuti waita snagged Guy wako kana musikana, hazvirevi unogona kurega kukwevera naye. Vamwe varume nevakadzi vanoda ngairambe romanced muukama kuti anzwe kudiwa uye vaishuva. Ita mumwe wako yeuka yenyu yokudanana mazuva nokumupa kana varo chipo kukoshesa. Zvipo havafaniri kuva zvemaoresa kana musingadi kuwana bhajeti nokuti. A chokoreti akasimuka, duku shoma trinket, kana CD chakaitwa gunsteling rudo nziyo kunogona kuita minimini.
Ichokwadi ukama hwakasimba zvinopfuura zvinhu zvokunyama uye zvipo, asi, kana dzorudo ndizvo wamuri kuvakazve, chipo kungava zvaunofanira kuwana vaya lovey dovey manzwiro inoyerera zvakare. Musamirire kusvikira gore kana rokuberekwa kana. A chipo pasina chikonzero packs it zvakawanda nezvahunoita pane chipo zvinotarisirwa.
5. Kutanga Kudanana Nomumwe Zvakare
Aihwa, Handisi kureva kubuda uye kuwana mumwe mutsva. Ndoreva, tora mudiwa wako kubva pamusoro yemichindwe zvakare. Vakaroorana kuti zvave muukama kwenguva refu kwazvo nguva, kunyanya avo kuti kurarama pamwe chete, kazhinji kanganwa pamusoro sei mafaro misi kunogona. Vachadurura kupinda tsika kuita wavo wenguva chinhu Ñ kuenda kwavo kwese resitorendi kudya kwemanheru, kurendesa mabhaisikopu, kana kubuda kuti aizikirimu Ñ asi usashora simba musi chaiwo apo vachiedza reignite dzorudo.
In kutanga ukama, Vakaroorana vakawanda vanonakidzwa kubuda uye kuita zvinhu zvitsva pamwe chete. Zviri kunakidza chaizvo kuenda misi kunzvimbo hamuna pamwe chete. Edza uye itai ichi zvakare. Kwete chete achienda misi kunzvimbo itsva uye mafaro mabasa pamwe chete kubatsira kuvakazve dzorudo, zvichaita kubatsira kusika asingakanganwiki nguva itsva pamwe kuti Fungai gare gare.
yeuka, Ukama vanofanira ngairambe pautsva uye haashandirwi kuti varambe dzorudo mupenyu uye kubudirira. Izvi Mazano shanu kungakubatsira ugomutsa manzwiro iwayo kudanana zvakare, asi nguva nzeve mumwe wako uye kuziva mamiriro ukama hwako chero kupiwa nguva zvakakodzera kuchengeta manzwiro iwayo inodziya kutsva mukati iwe nemumwe wako.